Cali C/lla Saalax oo lagu eedeeyey in xukuumadiisu marti galnayso kooxo Ajnabi ah – SBC
Cali C/lla Saalax oo lagu eedeeyey in xukuumadiisu marti galnayso kooxo Ajnabi ah
Iyada oo ay Dowlada Yemen dagaal xoogan kula jirto Koonfurta dalkaasi Al qacidada Jasiirada carabta ayaa waxaa dhigeeda lagu tuhmay in ay gacan siinayso kooxahaasi,iyadoona wadanka kusoo hogaaminaysa Kooxaha ajnabi ah sida uu sheegay sarkaal ka tirsan kooxaha kasoo horjeeda Nidaamka Dowlada Cali C/lla Saalax.
Cali Muxsin Al axmar oo taageersan kacdoonka ayaa ku tuhmay Taliska ugu sareeya Ciidamada ilaalada Jamhuuriyada iyo weliba Wakiilka laamaha Amniga wiilka uu dhalay walaalka Saalax,in uu ku marti galiyay gudaha dalkaasi Kooxaha ajnabi ah oo ka barbar dagaalama.
Cali Muxsin waxaa uu hadalkaasi sheegay xili uu saxafiyiinta kula hadlayay gudaha dalkaasi,waxaana uu sheegay in ay Yemen ahaan doonto mid ka amni iyo horumar badan sidii ay ahayd,hadii Cali C/lla Saalax uu booska baneeyo.
Muxsin waxaa uu kaloo tilmaamay in Al qacido la weyn doono marka uu talisku u gacan galo shacabka,iyadoona sida uu sheegay uusoo bandhigi doono cadaymo badan oo ku aadan xiriirka Xukuumada Saalax iyo weliba Al qacida marka uu booska baneeyo.
Madaxweynaha Yemen Cali C/lla Saalax ayaa la aamin sanaa in uu xiriir sokeeye kala leeyahay Maraykanka la dagaalanka waxa ay reer galbeedku u yaqaanaan Argagixisada,iyadoona xukuumadiisu ay iclaamisay dhowr jeer oo hore dagaalada ka dhanka ah Al qacida iyo weliba ururada taageersan.